एसईई परीक्षाफल : महेन्द्रनगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको यस्तो हालत !
प्रकाशित: २०७५ आषाढ १३ , १२:२४ बजे
महेन्द्रनगर, १३ असार । आइतबार प्रकाशित एसईई परीक्षामा कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक देखिएन ।
दैनिक मानसखण्डले मंगलबार सम्पर्क गर्न सकेका विद्यालयहरुमध्ये महेन्द्रनगर माध्यामिक विद्यालय (साधारण स्कूल)को नतिजा सबैभन्दा राम्रो रहेको पाइएको छ । सो विद्यालयबाट परीक्षामा सामेल ४६ विद्यार्थीमध्ये ३ जनाले ए प्लस ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । ११ जनाले ए र १६ जनाले बी प्लस ग्रेडमा सफलता पाएका प्रधानाध्यापक ललित सिंह साउँदले बताए ।
महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै भृकुटि माध्यामिक विद्यालयबाट एसईईमा सामेल ५६ जनामध्ये सी प्लसमा ४ र सी ग्रेडमा १२ विद्यार्थी सफल भएका प्रधानाध्यापक केशबदत्त पन्तले जानकारी दिए ।त्यसै गरी गोबरैयास्थित निङलाशैनी माध्यामिक विद्यालयबाट सामेल ४९ जनामध्ये उकजना बी प्लसमा र ४ जा बी ग्रेड प्राप्त गरी सफल भएका प्रधानाध्यापक घनश्याम भट्टले बताएका छन् ।
पंचकृत बैजनाथ माबिबाट परीक्षामा सहभागी २८ जनामध्ये २ जना बी प्लस र ६ जना बी ग्रेडमा सफल भएका प्रधानाध्यापक गोबिन्द सिंह पुजाराको भनाई छ । महेन्द्र माबि कटानबाट ५६ जना सहभागी भएका थिए । जसमध्ये जए ग्रेडमा ३ जना, बीमा ४ जा र सी प्लसमा प्लसमा ५ जना सफल भएका छन् ।
सुदूरपश्चिमकै एक मात्र कन्या विद्यालय जानकी कन्या माविबाट सम्मिलित २१ परीक्षार्थीमध्ये ३ जनाले बी प्लस र २ जनाले बी ग्रेड पप्त गरी सफल भएका प्रधानाध्यापक अन्जुला भट्टले बताइन् । पूर्णा माबि ऐरीबाट एसईईमा सहभागी ८८ परीक्षार्थीमध्ये ३ जनाले ए र ३ जनाले बी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेका प्रधानाध्यापक परशुराम पन्तले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैजनाथ माबि मटैनाबाट परीक्षामा सामेल ४५ जनामध्ये १ जनाले ए ३ जनाले बी प्लस र ९ जनाले बी ग्रेड हासिल गरेका लेखापाल मेघ नाथले जानकारी दिएका छन् । जिमुवास्थित शिद्धनाथ माबिबाट सहभागी ७७ जनामध्ये बि प्लसमा १ जना, बीमा ८ जना, सी प्लसमा १९ र सी ग्रेडमा ३६ जना सफल भएका प्रधानाध्यापक शेरबाहादुर चौहानले बताए ।
एसईई नतिजा : दोधारा–चादनीको यो अवस्था
बेदकोटमा एसईईको परीक्षाफल यस्तो !
एसईई परीक्षाफल : कुन विद्यालयको सफलता कस्तो ?